Taliyaha Ciidanka Amisom oo kormeeray Deegaanada Ceelbaraf & Biya Cadde (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Ciidanka Amisom oo kormeeray Deegaanada Ceelbaraf & Biya Cadde (Daawo Sawirada)
Taliyaha Guud Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, General Mohammedesha Zeyinu, ayaa toddobaadkan kormeeray Deegaanada Ceelbaraf & Biya Cadde Ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Ciidanka Xoogga Dalka oo gacan ka helaaya Xoogaga Amisom, ayaa bishii hore ee February bilaa dagaal Ururka Al Shabaab ugala wareegay gacan ku haynta Biya Cadde iyo Ceelbaraf.
Taliyaha Ciidanka Amisom, ayaa wuxuu si gaar ah uu u soo kormeeray fariisimaha ay goobahaasi ka sameysteen Ciidamada Militariga Somaliya iyo Amisom, isagoona isha soo mariyay qaabka ay ammaanka u suggaan.
Taliyaha, ayaa waxaa uu si isu midda uu u booriyay labada ciidan dadaalkoodu ku aadan la dagaalanka Ururka Al Shabaab, isagoona ugu yeeray inay sii wadaan gulufka ka dhanka ah Shabaabka.
Mohammedesha Zeyinu oo kormeerkiisu ku bilaabay Deegaanka Ceelbaraf, ayaa waxaa uu ka soo muuqday muuqaal laga soo diray Xafiiska Warbaahinta Amisom, isagoo markaasi sawiraan la gelaaya Saraakiisha Ciidamada Dowladda & Amisom.
Ciidamada Somalida iyo Amisom, ayaa waxaa toddobaadyada soo socda lagu wadaa inay qaadaan guluf militari, oo lagu doonaayo in Ururka Al Shabaab looga saaro dhulka ay ka jooggaan Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya.